Ahoana no hanalefahana ireo mpisompatra anaty aterineto: Torohevitra avy eny an-kianja · Global Voices teny Malagasy
Aza mandrera-tena amin'ny firesahana amina mpisompatra maherihery setra
Voadika ny 24 Mey 2019 6:21 GMT
saribakoly rakakabe mpisompatra, sary an'i Eirik Solheim tao amin'ny Flickr (CC BY-SA 2.0)
Nosoratan'i Ghausia Rashid Salam. Ny lahatsoratra voalohany tamin'ity dia nivoaka tao amin'ny bilaogin'i Bolo Bhi. Fantaro misimisy kokoa ny amin'io sy ireo fiarahamiasa hafa.
Hitantsika amin'ny fotoana rehetra mameno ny media sosialy ry zareo — ireny sarisary hafahafa izay manindrontsindrona, maneso, manakiana ary mandevilevy ny hafa mihitsy aza, izay raha ny hita dia manao izany ho an'ny fahafinaretany fotsiny. Ampahany amin'ny fiainana ny fisian'ny mpisompatra, ary ampahany koa amin'ny fiainana anaty aterineto.
Zavadehibe ny mahafantatra hoe misy fahasamihafana eo amin'ny fanohintohinana, ny fanaovana sarisary ho entina mihanihany sy ny fanaovana sarisary manala baraka tafahoatra sy manevateva. Mety hifanebatebaka na hifananihany anaty firahalahiana ireo mpinamana sy mpifankahalàla, saingy ery am-paratazan'ilay sehatra, misy ireo olona izay ny hany katsahany dia ny hamorona tontolo iray feno fahasiahana sy fanavakavahana. Ny mpisompatra dia olona iray izay misotasota ny hafa, manely tsaho ho toy ny zavatra tena nisy, na tsy sasatra manakiana ny hafa mba hitadiavany valinkafatra entanim-po. Ny vaovao tsara dia misy fomba maro isankarazany hiadiana amin'ny fitondrantenan'ireo mpisompatra.
Psikolojian'ny mpisompatra 101: Anaovy fandalinana ilay mpisompatra anao!
Mazàna ireo mpisompatra no maniry hahazo mpihaino betsaka mba ho vavolombelon'ny fanevatevana na fisotasotàna ataon-dry zareo — faniriana mafy ao anatin-dry zareo amin'ny ankapobeny ny mba hifantohana aminy. Mety hiezaka izy ireo ny hanome henatra ny hafa eny imasombahoaka na manehio fanakianana tsotra izao manoloana olona marobe. Rehefa asaina maneho hevitra momba ny olana politika ny mpisompatra iray ety anaty aterneto dia mety hilaza zavatra iray tsy miova aminà olona samihafa, amin'ny ankapobeny dia mpanisika hevitra toy ny mpanentana fandaharana adihevitra na mpilaza vaovao. Amin'ny fanaovana izany, zavatra katsahan-dry zareo ny hahazo ny fankatoavan'ireo olona manampahefana.
Rehefa mamely ireo olona manana toerana politika sy fantabahoaka ireo mpisompatra, mitodika mandrakariva any amin'izay lafy ratsy momba ilay olona ny anton-dresany. Mety ho resahan'ilay mpisompatra ny lafy ratsin'ny fifandraisana politika ananan'ilay olona, na ny fomba fijery ankapobeny ananany. Amin'ny tranga sasany, na dia ny endriky ny fiainan'izy ireny manokana aza dia iharan'ny famelezana. Na maharary sy manorisory tahaka inona aza ny fihetsik'ireo mpisompatra ety anaty aterineto, tsy afaka aroso izany ho antony hamerana, hametrahana sivana na handraràna media sosialy, na endrika hafa fanehoana hevitra ety anaty serasera. Betsaka ireo fomba hafa afaka hiatrehana ilay olana. Ireo tarika mpiara-mitantana ao amin'ny Bolo Bhi no nanambatra ity lisitra ity, ahitana torohevitra sy fitaovana hiatrehana ny mpisompatra.
Fantaro ny maha-samihafa ny fisomparana sy ny fanehoana hevitra
Raha tsy hoe miaty loza mitatao mivantana ho an'ny fahaleman'ny olona iray ny hafatra entin'ilay mpisompatra, na fanaingana mivantana hanao herisetra, tsy misy hetsika azo atao aminy akory. Na somary henjankenjana aza ny fomba nanehoany izay ambarany, dia mbola voaaro ho ao anatin'ny fahalalahana maneho hevitra izy. Fa afaka ianao, na a) mifidy ny tsy hiraharaha ilay kiana, na b) miatrika izany amin'ny fifandraisana imailaka samy olona anaty fifanajàna, na c) rehefa tsy tianao ny hifampiresaka anaty adihevitra lavabe, dia miteny fotsiny amin'ilay olona hoe takatrao ny zavatra lazainy ary dia afaka fotsiny ianao manaiky na tsia izay voalaza. Tena manandanja manokana io rehefa mitàna toerana ambony fanta-bahoaka ianao, toy ny hoe miasa aminà vondrona mpampahalàla vaovao, na sehatry ny fikambanana miasa ho an'ny daholobe.
Bahanana sy taterina ho toy ny hafatra tsy iriana: Ny sehatra media sosialy rehetra dia samy manolotra safidy avokoa ahafahan'ny mpampiasa mibahana ireo fanehoankevitra tsy iriany sy mitatitra azy ireny ho toy ny hafatra tsy niriana. Mety tsy fitsaboana miraikitra maharitra ao izy io — bahananao ny kaonty iray dia ny hafa mety mbola ho tafiditra. Na eo aza ny zavamisy hoe mety ho fandresena lahatra vonjimaika ihany io, dia efa zava-dehibe iray, araka izay ho hazavaintsika etsy amin'ny dingana faha-4.
Aza fahanana ireo mpisompatra: Ny fehezanteny iraisana momba ny fomba iatrehana ireo mpila vaniny ety anaty aterineto dia ny hoe “aza fahanana ireo mpisompatra.” Rehefa misy olona misotasota sy/na mandrahona anao, tena misy olana mahamay ao, saingy rehefa manandrana fotsiny hahazo valiny avy aminao ny mpisompatra iray ety anaty aterineto, angamba tsaratsara kokoa ny tsy miraharaha azy tsotra izao. Mivelona amin'ny hatezerana sy ny tsy fahazoana aina ary ny tsy fahasambaran'ny hafa ireo mpila vaniny sy mpisompatra ety anaty aterineto. Fanomezana an'ireo mpisompatra ny zavatra nokatsahiny ny famaliana azy amin'ny tsy fahazoana aina sy sorisory. Tsy mangataka anareo akory izahay hoe aza miresaka fandrahonana na aza atrehana izay sotasota mitranga. Atreho ilay izy, fa aza mandrera-tena amin'ny firesahana amina mpisompatra maherihery setra.
Tatero izay fanararaotana: Tsarovy ny tao amin'ny dingana faharoa rehefa nangatahanay ianareo mba hitatitra ny fanambaràna nataon'olona iray ho toy ny hafatra tsy niriana.? Ity no antony. Ny sehatra media sosialy rehetra dia manana ny politikany daholo momba ny fanararaotana, sy fomba fitorohana ireo mpanararaotra. Potsiro ireto rohy ireto mba hamakiana ny politikan'ny Facebook, Twitter, sy Google+. Rehefa manoratra imailaka, aza adino ny manome antsipirihany rehetra ilaina, pikantsarin'ny fàfana tamin'ireo kaonty na bitsika, ny pikantsary rehefa mitatitra hafatra tsy niriana, ary farany indrindra, tokony hita ao anatiny ny lisitr'ireo kaonty rehetra voarohirohy amin'ilay sotasota/sompatra.
Anaovy fanadihadiana ny momba ilay mpisompatra: Indraindray dia mora ny manakatra ny ideolojian'ireo mpisompatra, amin'ny famakiana ny votoaty zarain'izy ireny ety anaty media sosialy, na ireo bitsika na fanehoankevitra avoakany imasom-bahoaka, na mety manoratra bilaogy koa aza ry zareo. Amin'ny fanaovana fanadihadiana ireo votoaty natao ho an'ny daholobe (tsy manitsakitsaka ny mombamomba manokana an'ilay mpisompatra), azonao atao ny mahatakatra ny ideolojian-dry zareo, izay mety hifanohitra amin'ny fomba fihevitrao , ny fironana politika, na ny finoanao manokana.
Ovao ny fitantaràna: Ampiasao ny fahalalanao ilay mpisompatra mba hampahafantarana ny olona rehetra ety anaty media sosialy momba ny sotasota ataon'olona iray anao noho ny fomba fijerinao sy ny hevitrao. Hahatonga fanakianana ho an'ilay mpisompatra izany, fa tsy ho ianao indray no ho lasa lasibatry ny kiana noho ny fihetsika tsy voahevitra tamin'ireo andrana nataony hisomparana.
Ianao ihany dia afaka mibahana IP, na amin'ny alàlan'ny loharano ivelany: Matetika ny mpisompatra no mampiasa anarana maro samihafa — raha mibahana ny mombamomba ny olona iray eo amin'ny media sosialy ianao, misy iray hafa mety haka ny toerany. Raha toa tao amina tranonkala iray ianao no nisy nisompatra, na bilaogy toy ny WordPress, betsaka ny safidy ahafahanao mibahana ny adiresy IP an'ilay mpisompatra, hanasarotra ny làlan-dry zareo hisotasota anao amin'ny fampiasàna anarana samihafa. Amin'ireo tranga tsy ahafahanao mamantatra ny IP, toy ny media sosialy, tsy afaka mamboraka ny IP amin'ny olontsotra ireo tranonkala tafiditra amin'ilay resaka, dia fomba tokana azo atao ny mangataka manampahefana hanao ny fitakiana. Amin'ny toedraharaha tahaka ireny, alaivo sary ny fàfana misy ilay votoaty izay misotasota na mandrahona anao, ary mifandraisa amin'ny mpitantana ilay tranonkala izay afaka ny hanampy anao hanaraka ireo dingana miantoka ny fahalemanao manokana sy ety anaty aterineto.
Arovy ny momba anao manokana ety anaty aterineto: Ny votoaty zaraintsika amin'ny media sosialy dia mampifandray antsika amin'ireo namana sy fianakaviana, fa koa afaka ampiasaina hamelezana antsika. Zavadehibe ny ifankahazaranao amin'ireo politikan'ny media sosialy rehetra ampiasainao, ary mahafantatra ny firafitry ny mombamomba anao (paramètres) manokana avy amin'ireo fanavaozana sata eny amin'ny sarinao. Ataovy azo antoka hoe miaro ny fiainanao manokana ihany koa ireo fianakaviana sy namanao, satria matetika no kendren'ireo mpisompatra izay heveriny fa fahalemenao, ohatra, ireo akaky indrindra sy mamin'ny fonao.
Bolo Bhi dia manana lisitra iray amin'ireo fitaovana hitahirizana ny maha-tsara aro anao ety anaty tontolo nomerika, sy hiantohana fa tsy ho tonga eny an-tànan'ireo olona mety hanao ratsy anao ireo torohay saropady momba anao manokana.
Ity lahatsoratra ity dia ampahany iray amin'ny fiarahamiasan'ny Advox sy ny Bolo Bhi, vondrona Pakistaney mpiaro ny zo nomerika. Fantaro eto ny fiarahanay miasa amin'ireo vondrona mpiaro zon'olombelona manerana izao tontolo izao.